High Speed ​​Tdc Flange Roll kpụrụ - BOBO Machine Co., Ltd.
High Speed ​​Tdc Flange Roll kpụrụ
TDC Flange mpịakọta akpụ igwe na tumadi maka n'ichepụta ejikọta flanges eji na ventilashion ducts. The okokụre flanges nwere ọtụtụ atụmatụ dị ka elu na-arụ ọrụ arụmọrụ, mma akara arụmọrụ, ezi ejikọta ihe, etc. Ha na-adabara ndị ducts na nnukwu ngalaba.
TDC Flange mpịakọta akpụ igwe na-ugbua ka enwere decoiler, isi akpụ nkeji na ọnwụ usoro. E nwere ihe abụọ na ụdị ịcha usoro, onye dị mfe egweri wheel cutter na ndị ọzọ bụ akpaka ọnwụ na elu ọnwụ ọsọ – 6m / min.
Nke a na usoro anọ ụdị: T-20, T-30, T-35, T-40.
Naanị nkịtị fretsaw nwere ike ibelata TDC Flange n'akuku. Na ogologo nke Flange n'akuku kwesịrị 30mm erughị bụla duct ihu. Ịcha direction ga-dị ka e kwuru ekpe zere ebibi ihe owuwu Mgbe ịcha, ngalaba ga-smoothen.
Fanye n'akuku kpamkpam n'ime ọgwụgwụ nke flanges na ofu ya nke ọma ma si otú ahụ dum Flange etiti a kpụrụ.
Wụnye Flange etiti n'elu duct, site na otu onu dum Flange.
Idozi Flange etiti na duct site ntụpọ Weld ma ọ bụ ntu. Gwara anya kwesịrị dị ka Standard DW144 Isiokwu 5.
Na-atụ aro itinye kwesịrị ekwesị sealant jidesie n'ime akuku na elu n'akụkụ dum Flange na Flange n'akuku mgbe gwara.
Main Nka na ụzụ Parameters
voltaji: 380 V, 3 adọ, 50Hz
ndenye: 5.5 kW
àgwà ọsọ: 30 m / min
Nzọụkwụ nke rollers: 22 ụgbọ
Dayameta nke ala okporo: 40mm
Dayameta nke aro isi: 32mm
Anya n'etiti ụgbọ: 250mm
Materials nke rollers: GCr15, emenyu, HRC 58 ~ 62 ogo, ntekwasa na isiike chrone
akpacha ajị: esonụ ada ọnwụ usoro
Number nke decoilers: ọkọlọtọ, otu
mpempe akwụkwọ ọkpụrụkpụ	: 0.4 – 1.2 mm
ibu: 3.000 kg
akụkụ (h x w x l): 6000 x 1800 x 1500 mm
Duct Nlụpụta Auto-akara IV
3D Waya akpụ Machine